हाम्रा कार्यक्रम र बक्ताको सङ्ख्या « Loktantrapost
हाम्रा कार्यक्रम र बक्ताको सङ्ख्या
१५ जेष्ठ २०७३, शनिबार ०५:००
समाजको गतिशिलतासँगै सामाजिक जीवनलाई जीवन्त राख्न हाम्रो समाजमा बिभिन्न सङ्घ संस्थाहरू क्रियाशील छन् र तिनले बेला बेलामा विभिन्न कार्यक्रम समेत सम्पादन गरिरहेका हुन्छन् ।
खास गरी हामीले अहिले कार्यमुखी भन्दा पनि भाषणमुखी कार्यक्रम अलि बढी नै गर्न थालेका छौँ । भाषणलाई प्राथमिकता दिनु हाम्रो बाध्यता हो कि सोच नै भाषणमुखी हो यो बहसको बिषय होला तर किन हामी कार्यक्रमको खास उद्धेश्य भन्दा बाहिर गएर दर्जनौं बक्तालाई कार्यक्रममा उभ्याईरहेका छौं । त्यसमा पनि अधिकांश बक्ता आफ्नै गुणगान गाउन नै ब्यस्त देखिन्छन् हाम्रा कार्यक्रमहरुमा । के धेरै बक्ता भनेको कार्यक्रमको सुन्दरता हो ?
हाम्रो कार्यक्रमहरुको अर्को बिडम्बना पनि छ । त्यो के भने बक्ताहरुको हतारो । शुरुमा बोल्ने अनि हिंड्ने । उनीहरुलाई लाग्दो हो त्यस कार्यक्रममा भएका सहभागी भनौ या श्रोतागण नै भनौं, ती सबै काम नभएर तीनको भाषण सुन्न आएका छन् । अनि स्वघोषित महानबाणी फलाक्यो अनि अरुको सुन्ने धर्यता पनि नराखी हिंड्यो ।
यस्तो खालको परिपाटीले हाम्रो कार्यक्रमलाई साच्चैं उद्धेश्य केन्द्रीय बनाएको छ त ? यस बारेमा बेलैमा नसोच्ने हो भने हाम्रा कार्यक्रमहरु फगत औपचारिकतामा सिमित भईरहेका छन र त्यसमा भएको खर्च बालुवामा पानी झैं भईरहेका छन् । आज जेठ १५ गते अर्थात गणतन्त्र दिवस । यसपालीको गणतन्त्र दिवस बिगतको दिवस भन्दा फरक छ । त्यो के मानेमा भने आज हामीले गणतन्त्र दिवस मनाउँदै गर्दा हाम्रो हातमा नयाँ संविधान छ । जसलाई हाम्रै प्रतिनिधिहरुले संविधान सभा मार्फत निर्माण गरेका हुन् । राजनितिक रुपमा यति ठुलो उपलब्धी प्राप्त गरिसक्दा पनि हामी हाम्रा औपचारिक कार्यक्रमहरुलाई भने अलोकप्रिय बनाउन तर्फ निरन्तर लागिरहेका छौं । हामीले उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्ने तर्फ कदम बढाईरहँदा एउटा कार्यक्रमको उद्घाटन वा समापनमा पुग्दा त्यो दिन बिताउनु पर्ने बाध्यता भने हामीले चिर्न सकिरहेका छैनौं । आखिर हाम्रो बाध्यता कहाँनेर छ ? त्यसमा मन खोलेर बहस गरौ र आगामी कार्यक्रमहरुलाई उद्धेश्य केन्द्रीत गर्ने प्रण गरौं ।
यसो भनिरहँदा बक्त बिहिन कार्यक्रम गर्नु पर्छ भन्ने होईन । तर कार्यक्रम के उद्धेश्यका लागि गरिदैंछ त्यससंग सम्बन्धीत दुई वा तीन जना बक्ता मात्र राख्न सकिने अवस्थाको सृजनाको गर्ने हो भने त्यसले कार्यक्रमलाई आकर्षण पनि दिन्छ । सहभागीको समय माथी पनि न्याय हुन्छ । अनि उद्धेश्य बाहिरका बकमफुसे भाषणबाट पनि हाम्रो समाज मुक्त हुनेछ । त्यसैले आज कै दिनबाट हाम्रा कार्यक्रमको गरिमाको रक्षा गर्न सबैले लागी परौं ।
यसका केही चुनौती भने पक्कै छन् । त्यो चुनौती भनेको हाम्रो समाजमा हुर्किएको भाषणमुखी राजनितिक सोच नै हो । हाम्रो समाजमा थुप्रै राजनितिक दल क्रियाशील रहेका छन् । अनि ति दलसंग सम्बन्धित बिभिन्न तह र तप्काका नेतृत्व अनि भातृ संस्था र सुभेच्छुक संस्थाको नेतृत्व पनि जोड्ने हो भने एउटा गाउँ नै नेतामय हुन्छ । त्यसैले ती सबैलाई बोल्न दिनु पर्छ भने दवाब कार्यक्रमका आयोजकलाई पर्नें गरेकाले पनि हाम्रा कार्यक्रमहरु भद्दा खालको भईरहेका छन् । त्यति मात्र होईन हाम्रा समाजमा भएका सामाजिक संस्थाहरुको संख्या अनि निम्तो आएको सबै कार्यक्रममा तिनका अगुवाले बोल्नु पर्ने परिपाटी पनि कार्यक्रम निशस बन्ने अर्को कारण हो ।
जटिल छ तर असल कामका लागि प्रयास गर्ने हो भने त्यसले एउटा संस्कृतिको रुप लिनेछ र त्यसको सकारात्मक पक्षले सबैको मन जित्नेछ । अनि त्यसले निरन्तरता पाउनेछ । त्यसैले गणतन्त्र दिवस मनाउँदै गर्दा हाम्रो सोच पनि गणतान्त्रिक बनाउन सकियो भने त्यसले अबका दिनमा हामीले गर्ने औपचारिक कार्यक्रम चुस्त र फुर्तिलो बनाउने निश्चित छ ।